Midika ny fandresena miezinezina azon’ny pro-demaokraty tamin’ny fifidianana isan-toerana ao Hong Kong, fa maka sisiny i Beijing · Global Voices teny Malagasy
Midika ny fandresena miezinezina azon'ny pro-demaokraty tamin'ny fifidianana isan-toerana ao Hong Kong, fa maka sisiny i Beijing
Hihiratra ve i Beijing ka hanova ny politikany ao HK?
Voadika ny 28 Novambra 2019 5:43 GMT
Sarim-panazavana mampitaha ny voka-pifidianana filankevitra distrika taona 2015 sy taona 2019. Ny mena mampiseho ireo mpanohana ny rafitra ary ny mavo ireo mpanohana ny demaokrasia. Sary avy amin'i Stand News, mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Fandresena miezinezina no azon'ny vondrona mpanohana ny demaokrasia tamin'ny fifidianana filankevitry ny distrika tamin'ny 24 Novambra. Tamin'ny toerana miisa 452 any amin'ireo distrika madinika, azon'ny Demaokraty ny toerana 388 — toerana 263 ambony noho ny tamin'ny fifidianana teo aloha tamin'ny taona 2015. Very toerana 240 ny antoko mpanohana ny rafitra ka 59 sisa voatazony.
Maro ny toerana mety ho nafoin'ny pan-demaokraty any amin'ireo distrika maro satria efa voatsinjara tsara any amin'ny distrika rehetra ireo mpanohana ny rafitra. Amin'ny taham-pahavitrihana 70 isanjato misy amin'izao fotoana izao, nivelatra ho enina isanjato (vato 469.189) ny elanelam-bato azon'ny vondrona roa ary nanampy ireo pan-demaokraty handresy any amin'ireo distrika mbola niadiana mafy. Ireo distrika madinika, rafitra safidy tokana sy toerana tokana, izay ahazoan'ireo antoko politika manambola sy mpanohana ny rafitra vahana, no nitarika ho any amin'ny faharesena miezinezina ho an'ireo mpanohana ny rafitra. (Jereo bebe kokoa ny tokotanin-tsehatra amin'ny fifidianana Filankevitry ny distrika ao Hong Kong)
Referandaoma vita ho azy momba ny fihetsiketseham-panoherana
Heverina ho referandaoma vita ho azy momba ny hetsi-panoherana ao Hong Kong ny fifidianana ary nampiseho ny fanohanany ireo hetsika anti-governemanta ny maro an'isa na dia teo aza ny korontana sy ny fandravana nitranga.
Ny zavamisy; tokony ho ny atsasaky ny kandidà pro-demaokraty nandresy tamin'ny fifidianana no mahaleotena na vaovao tamin'ny fifidianana. Tsy manana rakitra tamin'ny fanompoana ny fiarahamonina ry zareo na (rafi-)pandaminana hiantoka ny fanentanam-pifidianana. Ny antony nandresen-dry zareo voalohany dia ny nandraisan-dry zareo ny tetipanoron'ny hetsika anti-governemanta, tafiditra amin'izany ny famotorana amin'ny herisetra sy ny fitondra-tena tsy mety nataon'ny polisy, hanaisotra ny fametahana ny hetsi-panoherana ho rotaka, hanaisotra ny vesatra iampangana ny mpanao fihetsiketsehana ary ny fanavaozana ara-politika demaokratika.
Nolazaina fa nahahendratra an'i Beijing ny voka-pifidianana. Tonia zokiolona iray ao amin'ny Foreign Policy no nilazana fa efa nanomana voaloham-pejy tantaram-pandresen'ny mpanohana rafitra ao Hong Kong ireo gazety mpitondratenin'ny Antoko Komonista Shinoa:
How Chinese media – and probably the leadership – became so convinced of a Beijing victory in Hong Kong's elections they wrote the story in advance.https://t.co/2tEFXVxLG8
— James Palmer (@BeijingPalmer) November 25, 2019
Tena resy lahatra tokoa amin'ny fandresen'i Beijing amin'ny fifidianana ao Hong Kong ireo fampitam-baovao shinoa – sy ny mpitarika koa angamba – hany ka nanoratra mialoha ny tantara.
Efa nanery ny governemanta hanemotra ny fifidianana ny vondrona mpanohana ny rafitra hatramin'ny septambra. Tamin'ny 8 novambra, nanao dokambarotra politika pejy voalohany tamin'ireo gazety lehibe mihitsy aza ry zareo mandrisika ny governemanta hanajanona ny fifidianana. Na izany aza, herinandro taty aoriana, taorian'ny nanelingelenan'ny mpanao fihetsiketsehana ny fifamoivoizana, mba hisian'ny fitokonana faobe, nanapa-kevitra i Beijing hanatontosa ny fifidianana araka izay nokinasa satria ninoana fa mety afa-mamindra ny hevi-bahoaka hirona any amin-dry zareo ry zareo.
Tamin'ny 14 Novambra, folo andro mialoha ny fifidianana, feno dokambarotra politika ny tanàna miantso ny vahoaka hampiasa ny vatony hilaza hoe “TSIA” amin'ny hetsi-panoherana mahery setra. Maro amin'ireo kintan'ny pop ao an-toerana no nahetsika hampiely ny hafatra “hifidy hampangina ny herisetra”. Tamin'ny 16 Novambra, nivoaka ny tobin-tafika misy azy ny Tafi-Panafahana Entim-Bahoaka hanadio ireo barazy eny an-dalambe. Pro-establishment groups also Nandamina ireo mpanohana azy ireo ny vondrona mpanohana ny rafitra hanadio ny lalana ho anisan'ny fanentanam-pifidianana ataon-dry zareo.
Natoky i Beijing fa mety handresy amin'ny fifidianana filankevitry ny distrika ny mpanohana ny rafitra satria tsy mbola resy mihitsy ry zareo hatramin'ny taona 1999. Nihevitra ry zareo fa tsy afa-mijoro miaraka amin'ny tetikadim-panoherana hiringiriny ny ankamaroan'ny vahoaka ary te-hamerina indray ny filaminana ara-tsosialy ao Hong Kong araka izay haingana.
Raha marina ny hoe te-hamerina ny filaminana ny vahoaka, maro no mahatsapa fa ny governemanta no voalohany nahatonga ny korontana. Tao anatin'ny enimbolana, tsy misy avy amin'ny tobin'ny manampahefana nosaziana noho ny korontana raha 4.500 ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana nosamborina ary miatrika fiampangana ho nanangana rotaka mety ho voasazy hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina.
Tany amin'ireo distrika izay nanatri-maso ny herisetra nataon'ireo pro-Beijing mpiakanjo fotsy sy ny fampiasan'ny polisy misahana ny rotaka etona mandatsa-dranomaso tafahoatra, bala fingotra ary eny fa hatramin'ny bala mahafaty aza, nanapa-kevitra ny “maro an'isa tsy miteny” hijoro sy hanohana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Ny voka-pifidianana nahavalalanina indrindra dia ny tao Yuen Long izay matanjaka ny vahohon'ny Biraom-Pifandraisan'i Beijing, ireo antoko politika mpanohana ny rafitra ary mpitarika ambanivohitra amin'ireo tambajotram-piarahamonina eny ankianja. Tsy nisy na dia seza iray aza azon'ireo antoko politika mpanohana ny rafitra. Nampiasa ny vatony ny “maro an'isa tsy miteny” hanoherany ny trangam-panafihana lalamby tamin'ny 21 jolay.
Diso hevitra tanteraka tamin'i Hong Kong i Beijing
Ny voka-pifidianana no ahafahan'i Beijing mahalala fa diso fitsarana tanteraka an'i Hong Kong izy. Nanomboka tamin'ny hetsi-panoherana fandroahana olona hody any Shina, nivadika ho krizy politika izay mihaika ny politika fototr'i Shina momba an'i Hong Kong ny teti-panoron'i Beijing ao Hong Kong. Indreto ny sasantsasany tamin'ireo izay nohamaivanin'i Beijing sy nandiso fiheverana azy amin'ny toe-draharaha politika ao Hong Kong amin'izao fotoana:
1. NIhevitra i Beijing ary nilaza fa nataon'ny politisiana pro-demaokrasia izay miara-miasa amin'ny hery vahiny ny hetsi-panoherana fandroahana olona hody any Shina;
2. Nihevitra i Beijing fa afaka tsy miraharaha fotsiny izao ny fitakian'olona iray tapitrisa ny governemantan'i Hong Kong satria mahazo vahana tanteraka ao amin'ny Vaomiera Mpanao Lalàna ireo antoko politika mpanohana ny rafitra;
3. Nihevitra i Beijing fa afa-miasa miaraka ny polisy sy ny andian'olona pro-Beijing hanamontsanana tahaka ny tamin'ny fanamontsanana ireo hetsi-panoherana tamin'ny taona 2014 pro-demaokrasia sy Bodoy ny Foibe izay hetsi-panoherana mivoaka eo;
4. Nihevitra i Beijing fa vitsy an'isa kely ireo hiringiriny amin'ny mpanao fihetsiketsehana ka azon'ny polisy potipotehina sy hosamborina izy rehetra;
5. Nihevitra i Beijing fa paika ara-politika hamelezana an'i Hong Kong sy ny governemanta ao Beijing ny fitakiana hanaovana fanadihadiana amin'ny herisetran'ny polisy ka tsy azo ekena;
6. Nihevitra i Beijing fa izay mahasoa ny tenany ihany no ahian'ny ankamaroan'ny mponina ao Hong Kong ka tsy hanohana ireo hetsika manohintohina ireo;
7. Nihevitra i Beijing fa hampihorohoro ny daholobe ny lalàna anti-maska sy lalànan'ny hamehana ka hahatonga azy ireo hihataka lavitra ny hetsi-panoherana;
8. Nihevitra i Beijing fa afa-manova ny hevi-bahoaka ao Hong Kong ny propagandy politika sy ny fandisoam-baovao aely amin'ny seha-baovao pro-Beijing sy ireo WeChat sy Weibo made-in-China;
9. Nihevitra i Beijing fa tsy mety ho resy amin'ny fifidianana filankevitry ny distrika izany ny mpanohana ny rafitra.
Voaporofo fa diso avokoa ireo ambony rehetra ireo. Saingy hahita ny marina ve i Beijing ary hanova ny politikany amin'i Hong Kong?